လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရသည့် NLD ဥပဒေ အကြံပေး ဦးကိုနီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်း - News @ M-Media
in ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ / မြန်မာသတင်း — January 29, 2017
သီဟ ရှာဖွေ တင်ဆက်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ဥပဒေအကြံပေး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်လေဆိပ် နိုင်ငံတကာဆိုက်ရောက်ဆောင်ရှေ့့ တက္ကစီ စတန်းမှာ ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ် ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးကိုနီ [ B.A (Law) ;LL.B. ]
ဦးကိုနီအား ဖခင် ဦးစူလ်တန်၊ မိခင်-ဒေါ်ခင်လှ(ခ) ဒေါ်ဟလီမာတို့မှ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင်၊ကသာမြို့နယ်၊ အင်းရွာကျေးရွာတွင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ယခုလုပ်ကြံခံရချိန်တွင် အသက် (၆၄)နှစ် ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကသာမြို့ အ.ထ.က (၁)ကျောင်းမှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက်ပညာ ဆည်းပူးခဲ့ရာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် B.A (Law) ဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် LL.B. ( ဥပဒေဘွဲ့)ကိုလည်းကောင်းရရှိ ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅-၁၉၇၆ ပညာသင်နှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေအသင်းကြီး၏ ဒုတိယဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနတွင် နည်းပြဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွင် နည်းပြဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ဆရာကြီး ဦးကိုယု၏ ရှေ့နေ ချိန်ဘာတွင် အလုပ်သင်ရှေ့နေအဖြစ်လည်း ကောင်း၊ အမှုလိုက်ရှေ့နေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဆရာအလုပ်ကို ဝါသနာပါ နှစ်သက်သည့်အလျောက် မေတ္တာဖြင့် ဟောပြောပို့ချမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ LAUREL LAW FIRM ကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင် တည်ထောင်ကာ ဥက္ကဌ အဖြစ် ဥပဒေအကျိုးဆောင်များအား သင်တန်ပေးခြင်း၊ လွှတ်တော်အမတ်များအား ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာ သင်ကြားပို့ချပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဦးကိုနီမှာ Laurel ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းပေါင် ၉၀၀ ကျော်၊ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အမှုပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များကို စီးပွားရေးဆိုင်းရာ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေရေးရာ အကြံပေးမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဦးကိုနီမှာ ဥပဒေရးရာနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပေဒ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများကိုလည်း အမြောက်အများ ရေးသားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ ဥပဒေအကြံပေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဗဟိုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေရေးရာ အကူအညီအပေးရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ဥပဒေအကျိုးဆောင်များအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတာရှေ့နေများအသင်း၊ မြန်မာစာရေးဆရာများအသင်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။
ကွယ်လွန်ချိ်န်တွင် ဇနီးနှင့် သမီး ၂ ဦး ၊ သား ၁ ဦးတို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဇေယျာဖြိုးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိ၊ ၄င်း၏ ကုမ္ပဏီရုံးခန်း တွင် သေနတ်ထည့်သည့် အိတ်နှစ်အိတ်တွေ့ရှ်ိ (Oct 13, 2017)
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး NLD စိတ်ဝင်စားမှုနည်းဟု တရားလိုရှေ့နေသုံးသပ် (Aug 19, 2017)
လေဆိပ်လုပ်ကြံမှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုများက အရှိန်ကျလာသည် ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု စစ်ဆေးသည့် တရားခွင် (Aug 7, 2017)
ဦးကိုနီအမှု တရားခံများလုံခြုံရေးကို တရားလိုရှေ့နေစိုးရိမ် (Jul 24, 2017)
လူသတ်မှု အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ တာမွေ ဒုဦးစီးမှူးသေဆုံးမှု (Jul 7, 2017)
ဝရမ်းပြေး အောင်ဝင်းခိုင်ကို ကူညီခဲ့သူ ရဲထွဋ်လှိုင် တရားလိုပြသက်သေဖြစ်လာ (Jun 24, 2017)
Police INTERPOL ရှေ့မှောက်က ၀ရမ်းပြေးအောင်ဝင်းခိုင် လွတ်မြောက်နေဦးမည်လော? (Apr 23, 2017)
ဦးကိုနီအမှုက တရားခံပြေးကို အင်တာပိုက အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ် (Apr 9, 2017)
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံမှု ယနေ့ရုံးထုတ်၊ အောင်ဝင်းထွန်းဆိုသူ ထပ်မံပါဝင်လာ (Mar 17, 2017)
“လှုံ့ဆော်တာနဲ့ကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့ရတယ်” (Mar 4, 2017)